Toerana Mampidi-doza Ho An’ny Fanaovana Gazety Ny Ao Sodàna Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2016 15:22 GMT
Sodane Tatsimo iray mpanao gazety, manangona vaovao eo ambadiky ny varavaran'ny Tranompanjakana nandritra ny fianianan'ny Filoha Lefitra Voalohany Riek Machar ny 26 Aprily 2015 teo. Mpanao gazety vitsy ihany no nahazo alàlana hiditra tao an'efitra. Sary navoakan'ny Iraka Mpisava làlan'ny Firenena Mikambana any Sodàna (UNAMIS) ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Miaraka amin'ireo fiampangàna tato ho ato momba ny fisamborana tsy ara-drariny sy ny fitomboan'ny fanafoanana ireo media, miatrika fanamby vaovao ny governemanta Sodane Tatsimo amin'ny fahefany ara-politika sy ny maha ara-drariny azy.
Lasa iray amin'ireo firenena manerantany mampidi-doza indrindra ho an'ny mpanao gazety i Sodàna Atsimo. Ny taona 2015 fotsiny, fito ireo mpanao gazety novonoina ary gazety an-tsoratra dimy no noterena nakatona tato anatin'ny 12 volana farany. Ny Aogositra 2015, media telo no nakatona tao anatin'ny telo andro.
Niharatsy ny fifandraisan'ny media ao an-toerana sy ny governemanta taorian'ny nitaterana ny volana Martsa 2016 fa nalaina an-keriny, nampijaliana, nodorana ary navela ho faty ny mpanao gazety Joseph Afandy. Talohan'ny nakàna azy an-keriny, notazomin'ireo manampahefana roa volana tsy nisy vesatra fiampangàna azy i Afandy noho ny nanakianany ny antoko eo amin'ny fitondrana.
Tamin'ny Tondron'ny Fahalalahan'ny Fanaovana gazety Manerantany farany, nidina toerana 15 i Sodàna Atsimo ary any amin'ny filaharana faha-140 amin'ny 180 ankehitriny, raha oharina amin'ny filaharany izay tany amin'ny faha-125 ny taona 2015. Mampiahiahy ilay fitotonganana tsy miaton'ny fanajàna ny fahalalahan'ny media eo amin'ny firenena, ary vao mainka niharatsy ny toejavatra noho ny ady an-trano.
Namotika ilay fanjakana tanora indrindra eto an-tany io fikorontanana io, izay nanomboka ny 15 Desambra 2013, raha nandroahan'ny Filoha Salva Kiir an'i Riek Machar — izay lefitrany tamin'izany ary niandraikitra voalohany ny filoha lefitry ny firenena hatramin'ny nahazoany fahaleovantena ny taona 2011 — tamin'ny fiampangàna azy ho nikotrika fanonganam-panjakana. Taorian'ny nandosirany an'i Juba renivohitra, ny taona 2013, niverina i Machar tamin'ity volana ity ary nanao fianianana ho filoha lefitra voalohan'i Kiir, izay antenain'ireo sasany ho mariky ny fampihavanana.
Nanameloka ny onjanà herisetra atao amin'ireo mpanao gazety ireo fikambanana iraisampirenena mpiaro zo, toy ny Amnesty International sy ireo Mpitati-baovao Tsy Voafetran-tSisintany (RSF), nitaky ny fampitsaharana ny famoretana atao amin'ny media ary nangataka ny famotsorana ireo olona voatazona tsy misy antony marina.
Nandritra ny atrikasa iray tsy ela akory izay, momba ny zon'olombelona, mpanao gazety iray eo an-toerana, Alfred Taban, nanatsiny ny Tai-Panafahana ny Vahoaka Sodane noho ny tsy nahavitàny niaro ireo zon'ireo olompireneny hampihatra ny fahalalahany miteny sy maneho hevitra.
Niteraka onjan'ahiahy mikasika ny hoavin'i Sodana Atsimo, ilay toedraharaha ratsy dia ratsy, ary hoe ho voatazona ho tomponandraikitra ve ny governemanta:
Sodana Atsimo: mpanao gazety 7 novonoina ny taona 2015. Tsy nisy mpamono nentina teny amin'ny fitsarana. Tsy misy fanazavana avy tany amin'ny governemanta: Taban Juba Monitor #JournoSafe
Ho valin’ny lahatsoratra iray momba ny fanafoanana ny media, nisy mpamaky iray naneho hevitra tamin'ilay kabary tsara lahatra feno fihantsiana ady nataon'ny Filoha Kiir ho an'ireo mpanao gazety izay mamoaka tatitra ratsy:
Filoha nandrahona ny hamono ireo mpanao gazety ?
Filoha nandrahona ny hamono ireo olompireneny ?
Filoha nandrahona ny hamono ?
Tokony hidina mandrakizay io lehilahy io.
Mpamaky iray nitaraina tamin'ny fitomboan'ny fanafoanana ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena:
Mampalahelo ireo andro iainantsika, hoe tsy afaka maneho ny heviny ny vahoaka, manoratra ary mizara ireo zavanisy mikasika ny tena zavatra mitranga marina manerantany. Iza no hanao dingana hitànana io Filoha io ho tomponandraikitra noho ireo zava-doza vitany? Mba marina e, izy no Filoha, dia midika ve izany hoe afaka manao izay rehetra tiany izy?
Efa nandrahona ireo mpitati-baovao noho ny fanoratana lahatsoratra ratsy mikasika ny Sodàna Atsimo ny Filoha Kiir, niaraka tamin'ny Minisitry ny Filazambaovao sy ny Fampielezam-baovao, Michael Makuei, voalaza ho nampitahotra ireo mpanao gazety noho ny fitsikerana ny famoronana ireo fanjakana rezionaly 28 tao anatin'ireo 10 teo aloha.
Novonoina ilay mpanao gazety, Peter Julius Moi, taorian'ny filazan'ny Filoha Kiir fa ho atao lasibatra ireo mpanao gazety izay nitatitra zavatra ratsy nanohintohina ny firenena.
Na niaro ny fomba fitondran'ny governemanta ny media tsy miankina aza ireo mpisolotena ny governemanta, Sodane Tatsimo maro no mahita ireo famerana maro atao amin'ireo media eo an-toerana ho fitaovana hanamafisana ny fahefana. Misy ny antso ho an'ny fangaraharàna bebe kokoa amin'ny fanehoana ny Sodàna Atsimo, amin'ny tsara na tsia:
Hetsika iray hafa goavana noraisin'ny governemanta any Sodàna Astimo ny fanaovana hery famoretana amin'ireo trano mpamoaka gazety any Sodàna Atsimo, ary hetsika fanitsakitsahina ireo zo io.
Nitranga tamin'ny fotoana nifanarahan'ireo antoko mpifanolana ny hitambatra hanao governemanta iraisana io, izay antenain'i Sodàna Atsimo sy ny fiarahamonim-pirenena hitondra fitsaharan'ny herisetra. Raha mbola mitohy mihamafy hatrany ny fanarahamaso ny media, mety tsy ho ela velona ny filaminana ao Sodàna Atsimo.